Ganacsiga Magaalada Boosaaso Oo Maalintii 7-aad Xiran Waa Maxay Sababta.
Wednesday July 12, 2017 - 11:59:59 in Wararka by Super Admin
Xaalad adag ayaa lagasoo sheegayaa maaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari kadib markii ganacsatada magaaladaas ay ku dhaqaaqeen shaqa joojin cabasha ah.
Maalintii 7-aad wax dhaq dhaqaaq ganacsi ah kama jiro magaalada dekadda leh ee Boosaaso waxaana xiran dhammaan suuqyada ganacsiga arrinkaasi oo saameyn daran ku reebay dadka danyarta ah.
Ganacsatada ayaa ka gadooday Canshuur aan xad leheyn oo maamulka ‘Puntland’ isku magacaabay uu kusoo rogay dhammaan goobaha ganacsiga taasi oo keentay in ganacsatadu ay albaabada isugu laabaan goobaha ganacsiga.
Xaaji Max’med Saciid oo katirsan guddiga ganacsatada Boosaaso ayaa warbaahinta u sheegay in illaa Afar Canshuur ay bixiyaan balse aysan awoodin in ay bixiyaan lacag aan horay loo arag oo ganacsatada gobolka Bari la duldhigay.
‘’Ilaa Khamiistii aan soo dhaafnay suuqa waa uu xiran yahay, waadna ogtihii dhibaatada arintaa ay sababtay awalba dadka oo xaalad abaar ah isaga jiray, haddana in ay waayaan meel ay wax ka iibsadaan wa dhibaato’’ ayuu yiri Xaaji Maxamed Saciid.
Wuxuu sheegay in duruufo adag oo dhanka nolosha ah ay ku suganyihiin dadka xamaalatada ah ee noloshoodu ku tiirsaneed waxa ay si maalinle ah uga shaqeystaan suuqa.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in maamulka ‘Puntland’ uu dukaan walbo dul dhigay lacag 20% ah oo ka baxsan tariifada badeecadaha dekadda ah, iyo sidoo kale canshuurta maalinlaha ah iyo midda billaha ah waana lacag aan cidna loo dhaafayn.
Boosaaso waa magaalada ugu weyn ee dhacda gobollada waqooyi Bari Soomaaliya waxaana gacanta ku haaya maamul ku xiran dowladda Xabashida Itoobiya islamarkaana aan wax naxariis ah usameynayn dadka shacabka ah.
Madaxweynaha Ereteriya Oo Booqasho Uga Bilaabatay Magaalada Addis Ababa.